Mianara manitsy ny sensor amin'ny famirapiratana ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Ny iOS 7 dia tototry ny fitarainana momba ny asany, bibikely izay toa namboarina tao amin'ny kinova vaovao an'ny Apple's operating system, iOS 7.1. Ny zavatra ratsy dia ireo mpampiasa sasany manohy mitatitra lesoka sasany amin'ny fiasan'ity iOS 7.1 vaovao ity.
Ny iray amin'ireo lesoka izay notaterin'ny mpampiasa dia a iDevices hamaly ny valin'ny sensor. Ny sensor ny famirapiratana dia mampifanaraka ny famirapiratan'ilay efijery amin'ilay fitaovana arakaraka ny haben'ny hazavan'ny tontolo iainantsika. Fanentanana izay efa nanoro hevitra imbetsaka ny deactivate hamonjy bateria fa tokony hampiasaina (raha zavatra). Aorian'ilay fitsambikinana dia hasehoko anao ny fomba hanjerena ny sensor ny famirapiratana ao amin'ny iOS 7 hanatsarana ny valiny.
Araka ny lazainay aminao, ny fiasan'ny mandeha ho azy ny fanitsiana ny famirapiratana dia azo alefa na tapaka avy amin'ny fikirakirana ny iDevice. Ny olana dia rehefa manova ny habetsaky ny famirapiratana amin'ny alàlan'ity menio ity na amin'ny alàlan'ny foibe fanaraha-maso (tanana) isika dia afaka manitsy azy io, izany hoe, ny fahatsapany dia mety ho diso fiheverana ny famirapiratan'ny tontolo iainantsika.
Fikirana ahafahantsika mamerina manitsy ny dingana tsotra vitsivitsy, lazao izany ireto dingana manaraka ireto dia mifanaraka tanteraka amin'ny iDevice hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny iPad's, iPhone's, ary iPod Touch's.
Ny dingana voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny mankanesa any amin'ny toerana misy anao 'Wallpaper' sy ny famirapiratana 'amin'ny alàlan'ny fampiharana' Settings 'an'ny iDevice.
Hofoaninay ny famirapiratany mandeha ho azy.
Amin'ny toerana maizina dia hampidinantsika ny famirapiratany amin'ny toerana farafaharatsiny (ny famirapiratana atoro anao amin'ny tontolo maizina).
farany Hodinihinay indray ny 'famirapiratanana mandeha ho azy', miaraka amin'ny jiro manodidina antsika.
Raha vantany vao nahavita ireo dingana rehetra ireo isika dia afaka miverina amin'ny tontolo maivana hahafahantsika jereo ny fanitsiana ny famirapiratana arakaraka ny hamafin'ny jiro izay manodidina antsika. Fanamafisana famirapiratana mahaliana izay hamonjy mandeha ho azy ny bateria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ianaro ny fomba hamehezana ny sensor hamirapiratra ao amin'ny iOS 7
Toa mahaliana, andramako izany. Misaotra Karim 😉
Vahao ny olan'ny geolocation hatrany amin'ny iOS 7.1